1. Enwekwara desserts dị ụtọ nke na-adị mfe ịme, ha bụkwa nhọrọ kachasị elu gburugburu ụwa n’oge niile. N'ihi na o nwere ihe na-esi ísì ụtọ Soft na ezigbo ire ụtọ Egwuregwu nwere ọtụtụ ụdị nke efere dị n'akụkụ Mee ka mma mara mma dịka uto gị ma ọ bụ ihe ị nwere n’ụlọ zuru oke. Ma bụ menu ụmụaka nwere ike ime Tinye ihe ụtọ na ihe uto na ezumike ma ọ bụ ụbọchị izu ụka na mmemme ndị dị mfe. Ma na-eche pụrụ iche Na otu esi eme pancakes Ọ bụ ezie na ọ bụ menu dị mfe Mana nye ncheta n'akụkụ niile na-emetụ n'ahụ
2. Mara mara pancake menu a na-ewu ewu, a na-ewere Pancake (Pancake) dị ka ụdị achicha ma ọ bụ achịcha dị larịị. Iji akụrụngwa emere site na ntụ ọka agwakọtara na mmiri ara ehi, bọta, akwa, shuga ma ọ bụ onye ọ bụla nke ga-atụgharị ma ọ ga-amasị Site na iweta ntụ ọka iji ghee mmanụ ma ọ bụ bọta ruo mgbe esiri ya Ya mere enwere okwu Pan Bụ mbido nke eji megharịa ọnụ, pancakes rie ọkụ Dị ka nri ụtụtụ Ma ọ bụ iji icho mma Mmanụ a andụ na mkpụrụ osisi Nakwa chocolate Enwere ike ime ya n'ụdị anyị na ezinụlọ ya masịrị.
3. A maara ihe ndị eji eme pancakes dị ka ngwa nri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kichin ọ bụla ga-enwe na ha, enweghị ike ịzụrụ ihe ọzọ.
4. Otu esi eme pancakes Nri dị ụtọ ma na-atọ ụtọ • Wunye ntụ ọka wit, shuga, nnu, ntụ ntụ n'ime nnukwu efere ma gheekọta nri niile ọnụ. Ghichaa ihe niile ọnụ ruo mgbe ha niile. Agbaze butter na mmiri. Wepụta iji kpoo ọkụ, tinye bọta ma bido ruo mgbe o yi. Wepụ obere oge • Ghichaa pan ahụ n'ọkụ. Ruo mgbe pan ahụ malitere ikpo ọkụ • Mgbe pan ahụ malitere ịgba ọkụ na Tinye obere butter.
5. • Maka ịma mma nke ịme pancakes, họrọ pan dị larịị • Mgbe ahụ chere ka bọta gbazee kpamkpam • Malite ịwụsa ngwakọta pancake na pan. Shapedị ewu ewu dị okirikiri. Hazie ihe ọ bụla masịrị gị Ma ọ bụ onye ọ bụla nwere pint nwere ike itinye pan ya ma tinye panti achicha ahụ. • Tụgharịa pancakes ahụ. Ruo mgbe pancakes dị nchara nchara, mara mma. • Dozie efere ahụ site na ikekwe ịtụkwasị n'akụkụ-na-n'akụkụ na-atọ ụtọ na utoojoo mkpụrụ osisi, tinye pịa ude, fesaa icing, wunye mmanụ a honeyụ, njikere ije ozi !!
6. Na ihu igwe dị jụụ, nwee naanị pancakes na-atọ ụtọ ma na-a withụ tii, kọfị ma ọ bụ koko dị ọkụ. Na-enyere aka ịmepụta ikuku dị mfe Iji kpoo ọkụ ma mara mma Gụnyere menu nke ụmụaka nwere ike ite dị ka ọ masịrị ha Yana icho mma efere dika nka na enweghi oke Nke ahụ bụ oyi Ka anyi tinye okpomoku site n’uzo di mfe iji mee pancakes iji mee ka ezinulo gi obi uto !!!